Hazaela - Wikipedia
Ny mpanjaka Hazaela, sary sokitra vita amin'ny vangin'elefanta.
I Hazaela dia mpanjakan'i Arama-Damaskosy (na Arama-Damasy) tamin'ny taona 842 hatramin'ny 805 tal. J.K. Araka ny voalazan'ny Baiboly dia tandapa izy talohan'ny haha mpanjaka azy. Nandritra ny fanapahany dia lasa fanjakana lehibe i Arama-Damaskosy izay nanapaka ny ampahany lehibe amin'i Siria sy i Palestina. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe חֲזָהאֵל / 'H̱azā'ēl,' fa amin'ny teny arameana dia חזאל. Amin'ny teny akadiana kosa dia Ḫaza’ilu.
Ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka no iresahana voalohany an'i Hazaela izay nanirahan'Andriamanitra an'i Elia hanosotra azy ho mpanjakan'i Arama-Damaskosy (1Mpanj. 19.15). Taona maro taty aoriana dia narary i Bena-Hadada II mpajakan'i Arama-Damaskosy ka naniraka an'i Hazaela tandapany miaraka amin'ny fanomezana nankany amin'ny Elisa (na Elisea), mpaminany nandimby an'i Elia. Naniraka an'i Hazaela koa i Elisa hilaza amin'i Bena-Hadada fa ho sitrana izy, nefa nambarany an'i Hazaela fa ho faty amin'ny fomba hafa ihany i Bena-Hadada na dia sitrana aza. Ny ampitson'io dia niverina tany amin'i Bena-Hadada tany Damaskosy i Hazaela ka namono azy ary nandrombaka ny fanjakana.
Nandritra ny 37 taona nanjakany dia nitarika ny Arameana hiady amin'ny tafik'i Jehorama mpanjakan'i Isrely sy ny tafik'i Ahazia mpanjakan'i Jodà izy. Taorian'ny nandreseny azy ireo tao Ramota any Galaada (na Ramota-Gileada) dia afaka nisakana ny fanafihan'ny Asiriana koa i Hazaela ka naka ny ampahan-tanin'i Israely any atsinanan'i Jordana, sy nahazo an'i Gata, tanànan'ny Filistina ary niezaka naka koa an'i Jerosalema (2Mpanj. 12.17-18). Resahina ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ny nahafatesan'i Hazaela (2Mpanj. 13.24).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hazaela&oldid=971066"
Voaova farany tamin'ny 31 Mey 2019 amin'ny 11:52 ity pejy ity.